Yobhi 31 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
31 “Ndenze umnqophiso namehlo am.+Ngoko ndinokuzibonakalisa njani ndinikela ingqalelo entombini enyulu?+ 2 Yaye sisiphi na isabelo esivela kuThixo phezulu,+Okanye ilifa elivela kuSomandla phezulu? 3 Ngaba asiyontlekele kumenzi wobubi,+Nelishwa kwabo baqhelisela okwenzakalisayo? 4 Ngaba akaziboni iindlela zam+Aze awabale nawo onke amanyathelo am? 5 Ukuba ndihambe namadoda angenanyaniso,+Nonyawo lwam luyangxama ukuya enkohlisweni,+ 6 Uya kundilinganisa ezikalini ezichanileyo+Yaye uThixo uya kuyazi ingqibelelo yam.+ 7 Ukuba ukunyathela kwam kuyaphambuka endleleni,+Okanye intliziyo yam ilandele amehlo am,+Okanye kukho isiphene esinamathele ezintendeni zezandla zam,+ 8 Mandihlwayele imbewu ize idliwe ngomnye,+Nenzala yam incothulwe. 9 Ukuba intliziyo yam iwexulwe ngumfazi,+Yaye ndilalela+ esangweni leqabane lam, 10 Umfazi wam makasilele enye indoda,Aguqe phezu kwakhe amanye amadoda.+ 11 Kuba leyo iya kuba yihambo evakalala,Yaye oko bekuya kuba sisiphoso esifanele sinikelwe ingqalelo ngabagwebi.+ 12 Kuba lowo ngumlilo oya kudla use entshabalalweni,+Yaye phakathi kwayo yonke imveliso yam iya kumila iingcambu. 13 Ukuba ndandidla ngokusala isigwebo sekhoboka lamOkanye sekhobokazana lam ekumangalelaneni kwabo nam, 14 Ndinokwenza ntoni ke xa uThixo ephakama?Yaye ndiya kumphendula ndithini na, xa efuna ingxelo?+ 15 Ngaba akenziwanga nguLowo wandenzayo esiswini,+Ngaba akamnye na Lowo wasilungisayo esibelekweni? 16 Ukuba ndandidla ngokubabandeza uyolo lwabo abasweleyo,+Yaye ndandiwabangela afiphale amehlo omhlolokazi,+ 17 Neqhekeza lam ndandilidla ngokwam,Ngoxa inkwenkwe engenayise ingalidlanga+ 18 (Kuba kwasebutsheni bam yakhulela kum ngokungathi kukuyise,Yaye ndaqhubeka ndimalathisa kusukela esizalweni sikama); 19 Ukuba ndandidla ngokubona nabani na etshabalala ngenxa yokungabi nasambatho,+Okanye lowo ulihlwempu engenasigqubuthelo; 20 Ukuba isinqe sakhe sasingandisikeleli,+Okanye ebezifudumeza kuboya+ obuchetyiweyo bamatakane am eegusha aziinkunzi; 21 Ukuba ndandiyihesha inkwenkwe engenayise,+Xa ndibona kufuneka uncedo lwam esangweni,+ 22 Maliwe igxalaba lam esixhantini salo,Nengalo yam yaphulwe kwithambo layo elingentla. 23 Kuba intlekele evela kuThixo yayindinkwantyisa,Yaye ndandingakwazi ukumelana nesidima+ sakhe. 24 Ukuba bendithembele kwigolide,Okanye kwigolide bendithe, ‘Ndikholose ngawe!’+ 25 Ukuba bendidla ngokuba nemihlali ngenxa yokuba impahla yam ininzi,+Nangenxa yokuba isandla sam sifumene izinto ezininzi;+ 26 Ukuba bendidla ngokukubona ukukhanya xa kukhazimla,Okanye inyanga exabisekileyo xa ihamba,+ 27 Yaza intliziyo yam yaqalisa ukuwexulwa emfihlekweni+Saza isandla sam sawanga umlomo wam, 28 Nako oko bekuya kuba sisiphoso esifanele sinikelwe ingqalelo ngabagwebi,Kuba bendiya kuba ndimkhanyele uTHIXO oyinyaniso ophezulu. 29 Ukuba bendidla ngokuba nemihlali ekupheleni kwalowo undithiye kakhulu,+Okanye bendichulumanca ngenxa yokuba efunyenwe bububi— 30 Yaye inkalakahla yam andiyivumelanga yona ukuba yoneNgokucela isifungo nxamnye nomphefumlo wakhe.+ 31 Ukuba amadoda entente yam ebengathanga,‘Ngubani onokuvelisa nabani na onganeliswanga kukutya kwakhe?’+— 32 Akukho mphambukeli uya kuchitha ubusuku ngaphandle;+Iminyango yam bendiyivulela emendweni. 33 Ukuba njengomntu wasemhlabeni bendikugubungela ukunxaxha kwam+Ngokufihla isiphoso sam kwipokotho yehempe yam— 34 Ngenxa yokuba bendisothuswa sisihlwele esikhulu,Okanye ndinkwantyiswa kukudelwa ziintsapho zasoYaye bendisithi cwaka, ndingaphumi ngesango. 35 Owu akwaba bendinothile wokundiphulaphula,+Ukuze ngokuvumelana nomqondiso wam uSomandla andiphendule!+Okanye ukuba umntu omangalelene nam ebebhale uxwebhu! 36 Ngokuqinisekileyo bendiya kuluthwala emagxeni am;Ndizibophe ngalo ngokungathi sisithsaba esizukileyo. 37 Bendiya kumxelela inani lamanyathelo am;+Ndisondele kuye njengenkokeli. 38 Ukuba umhlaba wam ubuya kukhala ngam ufuna uncedo,Ize ilile kunye imijelo yawo; 39 Ukuba isiqhamo sawo ndisidle ngaphandle kwemali,+Nomphefumlo wabanini bawo ndiwubangele wakhefuzela,+ 40 Esikhundleni sengqolowa makuphume ukhula olunameva,+Namakhakakhaka esikhundleni serhasi.” Aphelile amazwi kaYobhi.